Iindaba eNigeria nangaphaya: IBurna Boy iya kwiTV Rant + Okungakumbi
BU-Urna Boy uqhubeka ne-twitter, unyulo lwe-Bayelsa Governor-unyuliwe luthengisiwe, i-Chelsea iyavuma ukusayina i-Ajax winger. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UBurna Boy uya kwi-rant yasendle kwi-Twitter
Inkwenkwezi yomculo waseNigeria Burna Boy ibeke u-Twitter ngokuhlangana kunye ne rant yakhe. Uthe "Inyani! Ndisoloko ndazi ukuba ndikho kwaye NDINGUBUNGCWELE… okoko uFela Kuti. Kodwa @timayatimaya undixelele into kudala eyandenza ukuba ndingakukhathalelanga ukuba yeyona ilungileyo. "Umhlaba ungenza ngaphandle kokulunga" umhlaba uza kuqhubeka ujikeleza. ”
Ngexesha lerali yakhe, uBurna Boy weza nabanye abaculi kwi-akhawunti yakhe ye-Twitter. Phakathi kwezinye izinto, wabanga ukuba amagcisa aseNigeria ayengabalulekanga. Kwinkqubo yemisebenzi emibini, wabhala, "Aba bantu banqwenela ukuba ubabone ebusweni bakho bonke abantu banethemba elinje kwaye bayakuthandaza ngokusilela ukuze bazive ngcono ngabo. Obu Bomi kuphela. Kungenxa yoko le nto ukuncoma kungathethi kuthi cuz intiyo, umona kunye "kufanele ukuba ibinguye" benziwa sishukela. "
"AKUKHO BODY ityunjiwe kum. Wonke umntu dey uzifumanele zona. Ndiva apha, ukuba ubusazi indlela abasenze sabonakala ngathi sibuthathaka ngayo ngokucela nokuhlawula ilizwe lasentshona ukuba basithande uyabona ukuba akukho tafile icwangcisiweyo kwaye ndim ozise intlonipho oyonwabileyo ngoku.
Ukususela ngoko, izimvo ziye zahlulwa kwi-Twitter. Umcimbi omkhulu sele uthatha isigqibo sokuba ngubani kanye uBurna Boy ekuthethwe ngaye kwi-tweet.
2. Inkundla ePhakamileyo ilungisa unyulo lwe-Bayelsa unyulo, utshilo ophumeleleyo wePDP
Inkundla ePhakamileyo ngoLwesine ilwenyelisile unyulo lwe-Bayelsa State irhuluneli-Nyulo, UDavid Lyon, kunye neqabane lakhe elibalekayo, Biobarakuma Degi-Eremienyo, ebesele elungiselela ukusungulwa ngolwesiHlanu (ngomso).
Inkundla yaxhasa isigwebo sikaNovemba 12, 2019 weNkundla ePhakamileyo yase-Abuja, eyayingafanelekanga uDegi-Eremienyo kunyulo lokungenisa izatifikethi zobambiso kwi-INEC.
U-Eko u-Eko wagwetyelwa ubunyani buka-Degi-Eremienyo ngezizathu zokuba avakalise ulwazi olungeyonyani malunga neziqinisekiso zakhe zemfundo kwiFom CF001 yakhe yangeniswa kwi-INEC njengomgqatswa wolonyulo lowama-2019.
3. Iiprotini zoqhushululu kwiiofisi zonyulo lwaseMalawi
Intloko yekhomishini yonyulo uJane Ansah uphantsi kokugxekwa kakhulu
Ababhikishi eMalawi bavale iiofisi zekomishini yezolomzamo ngeenjongo zokunyanzelisa intloko ukuba iyeke emva kokuba iNkundla yoMgaqo-siseko ichithe unyulo lonyaka ophelileyo. Amakhulu abakhombisi abarhuqa i-5km (i-3.1 yeemayile) kwiiofisi zekhomishini kwikomkhulu lezorhwebo, eBlantyre, atshixa amasango okungena ngamakhonkco amakhulu, amdaka.
Amawakawaka abantu enza okufanayo kwikomkhulu, iLilongwe, aphathisa isitshixo sephathi segosa lomkhosi. Inkundla yafumana ukungahambelani okuninzi kupolitiko, kubandakanya nokusetyenziswa kwamanzi oluleko kumashiti e-tally. Intloko yekhomishini yonyulo igxininisa ukuba akukho bugwenxa.
4. Amagosa ase China agxothwa njengoncedo lokufa kwe-coronavirus ngokudlula kwi-1,300
Abasebenzi bezonyango abanxiba impahla ekhuselayo bathwala isigulana esikrokrelwa ukuba sinentsholongwane kwigumbi eliseWuhan, elikomkhulu lephondo laseHubei. Abanye abantu abangama-242 baseHubei basweleke kule ntsholongwane ngoLwesithathu
Amagosa ezempilo e-China kwiphondo eliphakathi laseHubei axele ngolwe-Sihlanu ukuba abantu abangama-242 basweleke kwi-coronavirus COVID-19 ukusukela ngo-Lwesithathu- olona luphezulu ngosuku olunye kwaye baphinda kabini irekhodi elidlulileyo - ukuqhuba ukubulawa kwabantu kulo lonke ilizwe ilizwe ukuya kwi-1,367.
Ikomishini yezempilo yeli phondo ikwathi xhaxhe elikhulu kumatyala amatsha, besithi abanye abantu abayi-14,840 baqinisekisiwe ukuba bosulelo kwisithuba seeyure ezingama-24 ukuya kuthi ga ezinzulwini zobusuku ngoLwesithathu.
Intloko yombutho wamaKomanisi kwiphondo laseHubei ikhululwe kwisikhundla sayo - esona sikumgca wamagosa asekuhlaleni egxothiwe. Owayesakuba nguSodolophu waseShanghai Yong Yong Utyunjwe njengonobhala omtsha weKomiti yePhondo yeHubei yeQela lamaKomanisi e-China, endaweni ye-Jiang Chaoliang.
5. I-Chelsea ifikelela kwisivumelwano sokutyikitya u-Hakim Ziyech
U-Hakim Ziyech ubandakanyeke ngokuthe ngqo kwiinjongo ze-166 - ufumana amanqaku angama-79, encedisa i-87 -kususela kwi-Eredivisie deut ngo-2012
I-Chelsea ifikelele kwisivumelwano kunye ne-Ajax yokusayina i-winger yeqela laseDatshi Hakim Ziyech kweli hlobo. Umntu oneminyaka engama-26 ubudala wayeyitha yokudluliselwa kweJanuwari ngomphathi weChelsea UFrank Lampard.
I-Ajax ibingazimiselanga ukuthengisa iMorocco yamazwe aphesheya kwifestile yokukhuphela njengoko bejaha isihloko se-Eredevisie.
I-Ajax iqinisekisile ukuba bayamkele umrhumo wama-40m euros (i- £ 33.3m )- okunokwenzeka ukuba inyuke iye kuma-44m euros (£ 36.6m )- ngesihloko sokuhambisa kuZiyech avuma amagama awodwa.
Ukutyikitywa kokuqala nguLampard emva kokutshintshwa kwe-Chelsea.
Uhlobo Rave Februwari 13, 2020